Ururka Al-Shabaab Oo baahiyey Sawirada Weerarkii ay ku qaadeen Kulbiyow[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Ururka Al-Shabaab Oo baahiyey Sawirada Weerarkii ay ku qaadeen Kulbiyow[Sawirro]
MUQDISHO – Ururka Al-Shabaab ayaa markii u horeysay soo bandhigay muuqaalo muujinaya weerarkii ay ku qaadeen xerada Kulbiyow ee Jubbada Hoose halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya ee ku sugar Soomaaliya ee qeybta ka ah AMISOM.
Weerarka Al-Shabaab ku qaaday degaanka Kulbiyow ayaa lagu soo beegay sanad kadib kii Ceel Cadde ee gobolka Gedo halkaasoo la aaminsan yahay in lagu dilay 180 askari balse Kenya ayaan weli ka hadlin tirada ciidankaas.
Sawiradan ayaa muujinaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay qabsadeen Saldhiga ,sidoo kale waxay muujinayaan meydad aad u badan oo kamid ah askant Kenya looga dilay weerarka iyo weliba iyaga oo gacanta ku dhigay gaadiidka gaashaaman.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay iney weerarka Kulbiyow ku dileen askar ka badan 50 asked ,balse dowladda Kenya ayaa qirsan oo keliya 9 asked in looga dilay weerarka.
Weerarka Kulbiyow ayaa aad ugu ekaa kii Al-Shabaab ku qabsadeen saldhigii Ceel Cadde ee Kenya sanadkii hore 2016.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ee labada dagaal ka qeybqaatay ayaa waxaa madaxa iyo gacanta midig ugu xirnaa maro cas sida ay muujinayaan sawirada labada dhacdo,labada weerar waxay ku bilowdeen gaari bom lagu soo xiray iyadoona ay dhaceen xili subs arooraad ah bisha Janaayo.